Kudutshulwe owesilisa kudunwa imoto yezithandani | News24
Kudutshulwe owesilisa kudunwa imoto yezithandani
Durban - Izithandani ebezingcebelelike epaki ziluphethe kabi usuku lwazo zihlaselwa izigebengu eGroutville.
Lesi sigameko senzeke ngeSonto ebusuku lapho izigebengu zifike zazama ukuduna imoto yowesilisa ehleli nentombi yakhe.
Amaphoyisa akwaDukuza athe owesilisa uphuthunyiswe esibhedlela kulandela ukudutshulwa esiswini.
"Izigebengu zidubule owesilisa ngesikhathi ziduna imoto yakhe yohlobo lweMazda Drifter eCharlottedale nokuyilokishi laseGroutville,"kusho uJohannes Khoza okhulumela amaphoyisa
OLUNYE UDABA:Zimkhalele odubule umshayeli ezama ukuduna imoto
Kwesinye isigameko eTshwane, amaphoyisa kaMasipala athole imoto yohlobo lweToyota Etios kwinxanxathela yezitolo eSoshanguve Crossing ngoMsombuluko emini.
Umnikazi wemoto wayebikele amaphoyisa ngokwebiwa kwemoto yakhe ngeSonto.
Okhulumela amaphoyisa u-Isaac Mahamba uthe kuboshwe owesilisa ngokutholakala nesondo lale moto.
"NgoMsombuluko kwenziwa uphenyo mayelana nalesi sigameko, kuboshwe abasolwa ababili eHammanskraal. Laba basolwa bayathinteka kwisigameko sokwebiwa kwale moto, oyedwa wabo utholakale nesibhamu sohlobo lwe-9 mm esingekho emthethweni,"kusho uMahamba.